बुधबार सबै विदेशी मुद्राको भाउ घट्यो, कुन देशको कति ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more बुधबार सबै विदेशी मुद्राको भाउ घट्यो, कुन देशको कति ?
बुधबार सबै विदेशी मुद्राको भाउ घट्यो, कुन देशको कति ?
माघ १५ गते, २०७६ - ११:०७
काठमाडौं । बुधबार सबै विदेशी मुद्राको भाउ घटेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार १ अमेरिकी डलरको खरिददर ११३ रुपैयाँ ८३ पैसा र बिक्रीदर ११४ रुपैयाँ ४३ पैसा तोकेको छ । हिजो खरिददर ११४ रुपैयाँ र बिक्रीदर ११४ रुपैयाँ ६० पैसा रहेको थियो ।
त्यसैगरि कोरियन वन १ सयको खरिददर ९ रुपैयाँ ६५ पैसा र बिक्रीदर ९ रुपैयाँ ७० पैसा तोकेको छ । हिजो यसको खरिददर ९ रुपैयाँ ६९ पैसा र बिक्रीदर ९ रुपैयाँ ७४ पैसा तोकेको थियो ।
माघ १५ गते, २०७६ - ११:०७ मा प्रकाशित